Unoita ngonono here? Rara neApple Watch yako uye rega kuzviita | Ndinobva mac
Kana paine chinhu chimwe pamusoro peApple Watch kuti mawatch anokwikwidza anogona godo, ndezvekuti vanogadzira vanoramba vachigadzira maficha anoita kuti kushanda kweApple Watch kuenderere mberi nekuwedzera. Mune ino kesi ini ndoda kukuudza iwe nezve a Yemahara kunyorera iwe yaunogona kurodha pasi kubva kuApp Store kudzora kwako ngonono.
Iyo app inonzi Kurara Cycle uye ikozvino zvinotora yako yekurara kutenderera kuve account uye inokubatsira iwe kudzivirira iwe kubva kunonoka husiku hwese nezvose izvi zvinoreva.
Kana iwe uine matambudziko nekukosora uye mumwe wako akakupa chirevo chekupedzisira, Kurara Purogiramu ndiyo mhinduro yekupedzisira. Kudzivirira dambudziko rekukorobha chinhu chakanyanya kunetsa kudzora mune vamwe vanhu uye dzimwe nguva vanofanirwa kurapwa kunodhura uko kunosvika pasina. Iye zvino timu Yekurara Kutenderera yaita zvavanogona mune ichi chishandiso chitsva cheApple Watch iyo inokubatsira iwe kudzora ngonono yako.
Kunyangwe iwe uchifunga kuti iko kushanda kwazvinoita kukuteerera iwe paunenge wakarara kuti kumutse iwe pane imwe nhanho, hazvina kudaro. Iyo Kurara Kutenderera timu yakange iriko kweinopfuura gore, kubvira payakaburitsa vhezheni yekutanga yebasa iri, kuongorora mamwe mazana emazana evanhu kuti vagadzirise mashandiro echishandiso chitsva ichi kusvika pakakwirira.
Vagadziri vechishandiso vanoona kuti kana iyo iPhone, iyo yakabatana neApple Watch, ikaona kuti uri ngonono, inotumira chiratidzo ku Apple Watch kuitira kuti Taptic Injini inzwike nenzira isinganzwisisike pachiuno chako. Zvinoita sekunge vakakupa gokora rehupenyu hwese kana ukarara nemumwe munhu. Ivo vanoti kudedera uku kwakajeka zvekuti hakuburitse muhope, kuburitsa chete kuti iwe chinja chinzvimbo.
Unogona kurodha kunyorera mahara kubva pano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Unoita ngonono here? Rara neako Apple Watch uye mira kuzviita
Santiago Dulanto Braschi akadaro
Uye inotakura nguvai?
Pindura Santiago Dulanto Braschi
Iliana Melgarejo akadaro
Pindura Iliana Melgarejo
Emmanuel garcia akadaro
Tarisa mhinduro yematambudziko ako Anele Garcia anogona kundipa hahahaha
Pindura kuna Emmanuel Garcia
Anele Garcia akadaro
Haha rega uzvigadzirire kamwechete
Pindura Anele Garcia
Chinjana kubva kune imwe desktop uchienda kune imwe mu macOS uine keyboard pfupi
Macintosh Icon Dhizaina Susan Kare Akapihwa Mubairo weKwe Hupenyu Hupenyu Kubudirira